हिमपहिरोको कहर | चितवन पोष्ट
छिमेकी जिल्ला गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकास्थित साम्दो र सामागाउँ दुई सातादेखि हिउँले पुरिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । २० वर्षपछि भएको हिमपातले ती गाउँहरुमा आठ फिटसम्म बाक्लो हिउँ जमेको छ । जब कि, सो क्षेत्रमा औसत घरको लम्बाइ नै ६ फिट अग्लो हुने बताइन्छ । हिमपात र हिमपहिरोका कारण जनजीवन ज्यादै कष्टकर र अत्यासलाग्दो भएका कारण ४५ परिवार विस्थापित हुन पुगेका छन् । हिमपातका कारण एउटा घरको मानिस अर्कोमा जान सक्ने अवस्था नहुँदा मानिसदेखि पशुचौपायासम्मको बिचल्ली भएको छ । साम्दो गाउँवासी घर नै छाडेर विस्थापित हुनु परेको छ भने सामागाउँका १२० घर हिउँले पुरिएको जनप्रतिनिधिलाई उद्धृत गर्दै पत्रपत्रिकाहरुले समाचार छापेका छन् । सो क्षेत्रमा याक र चौँरीगाई कति मरे भन्ने यकिन छैन । सामागाउँ ३ हजार ५२० मिटर र साम्दो ३ हजार ७०० मिटर उचाइमा रहेका छन् । हिमपातका कारण कस्तुरी, नाउर, थारजस्ता लोपोन्मुख जनावर पनि धमाधम मर्न थालेका छन् । छिमेकी जिल्लामा भएको यस्तो विपत्ति भूकम्पले दिएको कहरभन्दा कम्ती अत्यासलाग्दो छैन । तर, सो गाउँमा कुनै पनि सरकार भएको अनुभूति गाउँवासीले गर्न सकिरहेका छैनन् । यो साह्रै दुःखद र विडम्बनाको कुरा हो ।
जनप्रतिनिधिका भनाइमा गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ । अब कोही पनि पीडित हुनुपर्दैन, तीन तहको सरकार छ भन्ने गरिन्छ । तर, दुई गाउँमा परेको हिमपातको पीडा बयान गरिसाध्ये छैन । यस्तो प्राकृतिक विपत्तिमा समेत सरकारले जनजीवन कस्तो छ ? मानवीय सहायता केकस्तो छ ? उद्धार र राहतको अवस्था कस्तो छ भनेर चासो राखेको छैन । जनताका लागि सरकार चाहिने पनि यस्तै बेलामा हो । आपतविपत् परेका बेला पनि सरकारको उपस्थिति नहुनु भनेको राज्यविहीनताको स्थिति हो । सबै जनताको अभिभावक बनेर हरेकका दुःखपीडा र विपद्मा सहयोग गर्नु सरकारको एकमात्र कर्तव्य हुन आउँछ । तर, स्थानीय सरकारकै उपस्थिति नरहेको पीडाका स्वरहरु सुनिनु अवश्य दुर्भाग्यको कुरा हो । गोरखाको दुर्गम दुई गाउँ एक दृष्टान्त मात्र हो । नेपालका अन्य हिमाली क्षेत्रहरुमा पनि यसवर्ष झरीसँगै हिमपातले पीडित जनता चिसो ठिहीले कठ्यांग्रिएका छन् । अझै पनि अस्थायी टहरोमै जीवन गुजारिरहेका भूकम्पपीडितका लागि हिमपातले कष्ट दिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा बाक्लो हिमपात हुँदा भूकम्पपीडितका टहरो हिउँले छोपिएका छन् । पीडितहरु कठ्यांग्रिएको शरीर धुनी बालेर तताइरहेका छन् ।
कतिपय गाउँ सञ्चार सम्पर्कबाट विच्छेद हुन पुगेका छन् । चिसोले अस्थायी शिविरमा आश्रित भूकम्पपीडित बढी प्रभावित भए पनि सरकारले तिनीहरुको पीडा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । भूकम्पबाट पीडित भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कतिपयले अझैसम्म घर बनाउन सकेका छैनन् । प्रायः घरहरु निर्माणाधीन रहेकाले हिमपातले चिसो निम्त्याउँदा जनजीवन नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेको छ । हिमपहिरोको त्रासले गाउँ नै छाडेर विस्थापित जीवन बिताउनुपर्ने नियति कम्ती कहरको विषय होइन । देशको भौगोलिक अवस्थितिका कारण जनताले प्राकृतिक विपत्ति सहदै आउनु परेको छ । विपत्तिलाई टार्न नसकिए पनि विपत्तिमा परेका जनताको आर्तनाद सुन्न नसक्नु सरकारको ठूलो लापर्बाही हो । हिमाली क्षेत्रका पीडित गाउँवासीले जनप्रतिनिधिबाट समेत सहयोग नपाएपछि आफ्नो मत नै खेर गएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्था आउनु गणतन्त्र नेपालका लागि सुहाउने विषय कदापि होइन । जनताको पीरमर्कामा सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्ने यस्तै विपत्तिको समयमा हो । बढ्दो हिमपातले दुई सातासम्म बस्ती नै पुरिँदा सरकार बेखबर बन्छ भने कसरी देशका जनताले सरकारको अनुभूति गर्न सक्लान् ? जनतालाई खुसी र सुखी बनाउने अभियान कसरी सम्भव होला ? तसर्थ, सरकारका आँखाले हिमपहिरोले गाउँवासी विस्थापित भएको अवश्य देख्नुपर्छ ।